galmudugnews.com » Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku qaatay Shariif Sakiin ?
Home » WARARKA » Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku qaatay Shariif Sakiin ? Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku qaatay Shariif Sakiin ? galmudug on
1 Comment Views 16489Sirdoonka Kenya ayaa diyaarad qaasa Muqdisho uga qaatay Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Somalia Shariif Hassan Sheekh Adan oo Nairobi loogu sameeyay soo dhaweeyn heer Qaran.
Sirdoonka Kenya ayaa Shariif Sakiin ka codsaday inuu codkiisa siiyo Musharaxa Cabdi Wali Gaas sida ay Waagacusub u xaqiijiyeen diblomaasiyiin ka tirsan Dowladda Kenya.
Dowladda Kenya waxay Shariif Xasan u bandhigtay qorshaheeda Somalia iyo kaalinta Dowladda Norway.
“Waxaanu dooneynaa inaan maamulno Marko ilaa Xadka Kenya la wadaagto Somalia ,waxaan ka qodeeynaa Ceelal Shidaal oo ay maalgelineyso Dowladda Norway sidaas darteed siyaasiga kaliya oo danaheena saxiixaya waa Cabdi Wali Gaas,adigana waxaan kaa rabnaa inaad Codkaada siisid Cabdi Wali Gaas” ayey Saraakiisha Sirdoonka Kenya ku yiraahdeen Shariif Hassan.
Shariif Hassan ayaa ugu jawaabay “ Aniga cadawga kaliya ee aan leeyahay Waa Cabdi Wali Gaas sidaas darteed waxaa la ii qaatay inaan codkeeyga siiyo Cadow ama Farmaajo oo heysta 103 Xildhibaan”
Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Kenya ayaa wada hadalka Shariif Hassan la wareegtay lamana ogana waxyaabaha ka soo bixi doono.
Ra’isulwasarahii hore ee Somalia Cabdi Wali Gaas ayaa Dowladda Kenya u balanqaaday inuu u saxiixi doono maamulka AZANIA si ay ula wareegaan gacan ku heynta Xadka Somalia ilaa Magaalo xeebeedka Markko
Kenya malahan galgal siyaasadeed sida Ethiopia waxaana muuqato in rajadeeda ku xiran tahay guusha Cabdi Wali Gaas.
Marka la qiimeeyo Musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxweynenimada Somalia waxaa ugu cad cad Mohamed Farmajo,Cabdillahi Cadow iyo Shariif Sheekh Ahmed.
Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku qaatay Shariif Sakiin ? " galmudugnews.com » Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku … | Reading India News says:	2012/08/31 at 7:35 am	[...] is the original post: galmudugnews.com » Topnews:- Sirdoonka Kenya oo diyaarad ku … This entry was posted in Google Topnews and tagged akhrisay, gudoomiyahii, hassan, kenya, [...]
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19985 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19674 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16376 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16190 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14882 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14342 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14310 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13786 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12881 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12674 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12646 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12353 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12070 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11964 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11683 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11615 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11592 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11580 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11468 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11330 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11256 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11248 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11059 hits Home About